जाडोमा हिटर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? यी ५ कुरामा ध्यान दिनुस « Kathmandu Pati
जाडोमा हिटर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? यी ५ कुरामा ध्यान दिनुस
काठमाण्डु – हिउँदे मौसमको शुरूआतसँगै जाडो छल्न घर, कार्यालय सबैतिर हिटरको प्रयोग हुने गरेको छ । चिसो याममा न्यायोपनका लागि हिटर उपयोगी भएता पनि यसलाई प्रयोग गर्न नजान्दा दुःखदायी घटना समेत हुने गरेको छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार झ्याल–ढोका बन्द गरी आगो ताप्ने वा हिटरको प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले घातक हो । जाडो छल्नका लागि भनेर ब्लोअर वा हिटर प्रयोग गरिन्छ । तर यी सामान उपयोग गर्न नजान्दा स्वास्थ्यमा असर पर्ने मात्र नभएर दुर्घटनासमेत हुन सक्ने भएकाले यी कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ :
१. हावाको ओसिलोपना सोस्छ:
जब तपाईं हिटर खोल्नुहुन्छ, तब यसले तपाईंको वातावरणमा भएको ओसिलो हावालाई सोसिदिन्छ । हिटर धेरै प्रयोग गर्दा छाला सुख्खा हुने तथा चिलाउने समस्या आउन सक्छ । बालबालिकाको नरम र संवेदनशिल छालाको लागि हिटर एकदमै नराम्रो कुरा हो ।
२. निसासिने गराउँछ
श्वास प्रश्वासको समस्या भएकाहरुलाई हिटरले स्वास फेर्न अप्ठयारो बनाउन सक्छ । हिटर प्रयोग गर्ने हो भने सधैं एक बाल्टिन पानी राखेर झ्याँलहरु खुल्ला राख्नुहोस् ।
३. शरीरको तापमान तलमाथि बनाउँछ
हिटरको कृतिम तापमानमा बस्ने बानी तपाईंको शरीरलाई परेको छ भने जब तपाईं बाहिर जानु हुन्छ तब तपाईंको शरीरको तापमान अचानक गडबड हुन सक्छ । यस्तो बेला तपाईं बिरामी पनि पर्न सक्नुहुन्छ ।
४. आगो तथा चोटपटक लाग्न सक्छ
जब तपाईं हिटरमा धेरै लामो समयसम्म बस्नुहुन्छ, तब तपाईंको शरीरको अंग जल्ने तथा चोटपटक लाग्ने सम्भावना हुनसक्छ ।
५. बटम लाइन
हिटर प्रयोग गरिसकेपछि यसलाई टर्न अफ गर्न नबिर्सनुहोस् । यसको माथि कुनै पनि वस्तु नराख्नुहोस् । हावामा ओसिलोपनाको सन्तुलन कायम गर्न बाल्टिन भरी पानी राख्नुहोस् । हिटर प्रयोग गर्न पावर कर्ड एक्सटेन्सन अर्थात मल्टिप्लग प्रयोग नगर्नुहोस् ।